By सपनासंसार August 24, 2009
यो कबिता नेपाल र यूएर्इमा रहेका भ्रष्टचारी, तस्कर र माफियाहरुले खेलेको भुमिकाको कारण सृजित हो । -बसन्त
आज फेरी सपना देखें
तिमीलाई भैसिले लखेटेको
मध्यरातमा जुरुक्क उठेर
घरबाहिरका अर्नाहरुले खेद्दै रहेछन् ।
भो त्यो कुरा नगर
तिर्मो घरबास उठ्लार्
इज्यत मात्र होइन
तिर्मो गाँस, बास र कपास
र जीवन हो ।
मैले पनि भयङ्कर सपना देखेँ
गाँउघर, शहर मात्र होइन
प्रदेशमा पनि अैठनहरु आएर
तिर्मो गला थिचिरहेछन् ।
बल्ल तल्ल बाँचेका
कुबेर बन्ने होडमा
जिउँदो बलि दिदै
कठ्ठै ! बाँच्नु न मर्नुको दोसाधमा
भेडा बाख्रा झै बेचिरहेछन् ।
आमाको ममता न हो
रुदैँ सगरमाथा उक्लिएर
प्रदेश तिर चिहाए
ममताले बाँधेको देखेँ
अँगालो हालेर राखेको देखेँ
भावविहल भै आँखाबाट आँशु खस्यो
खुसि र हर्षो
यस्तो दृष्य नदेखेको ।
त्रि्रो जस्तै सपना देखेँ
सपुतहरुलाई घरकै भैसिहरुले खेदिरहेछन् ।
हान्न र फाल्न सिंग उदाई रहेछन् ।
पापै पापले भरिएको धर्ती बिच
आधा रातमै उठेँ
हे जन्मदाता !
संसारका सृष्ट्रिकर्ता !
त्यताको कर्म र कतर्ब्यमा
बाँच्न दिदैनौ भने
जन्म पनि नदेउँ
म सधै मेरा सन्तानहरु
अनाहकमा बली चढाउन चाहन्न ।
बली चढाउन चाहन्न ।
Prakriti 8/25/09, 3:37 AM
कस्तो राम्रो रहेछ !
Anonymous 8/25/09, 6:48 AM
Ho ram ro cha kabita basanta jee, shahite batai bha ye p ni true bolnu bhaye ko ma thanks
Anonymous 8/25/09, 6:47 PM
एड्मिन जी यसरी करौडौं साइटमा प्रकाशीत भएको चैते सामाग्री सपना संसारमा टास्दा शोभा नदेला की?
सपनासंसार 8/25/09, 7:20 PM
सपनासंसार को एक मात्र चाहना , आफ्ना पाठक हरुलाई नौला अनि चोटिला प्रस्तुती हरु प्रस्तुत गर्ने हो ! र सपनासंसाले पनि एउटै लेख धेरै आगनिमा हुने प्रस्तुतीलाई दुरुत्साहित गर्छ ।